Halloween ayaa soo socda, waxaana jira qaar ka mid ah waa in la arko filimada naxdinta leh | Ragga Stylish
Iyada oo la imaatinka Halloween, waxaa jira filimo u adeega madadaalo iyo cabsi gelin, si isku mid ah. Habeenkii ugu naxdinta badnaa sannadka ayaa soo socda waana inaad u dabbaaldegtaa oo aad la dhigtaa filim cabsi xun leh.
Cabsidu waxay ahayd mawduuc soo noqnoqday, filimo badan oo nasoo jeediyay. Iyo Halloween sida caadiga ah waa marmarsiiyo fiican.
1 Exorcist (1973)
2 Iftiiminta (1980)
3 Cilmu-nafsiga (1960)
4 Dib u soo celinta (2007)
5 Orod (2017)
Muunad muhiim ah oo filim cabsi leh, oo ay dhiirrigelisay jinsi-saarid dhab ah oo ka dhacday Washington 1949. Gabadh yar oo 12-sano jir ah ayaa bilawday inay yeelato dabeecado aan caadi ahayn hooyadeedna waxay u tagtaa wadaad leh daraasado cilminafsiyeed.
Diintu waxay aaminsan tahay in asalka sharku uu yahay ruuxi. Xalku waa jimicsi.
Ka mid ah filimada naxdinta leh, Shining waxaa loo tixgeliyaa filimka ugu cabsida badan leh. Doodda waa la wada ogyahay. Qoys jiilaal ku qaadan doona hudheel laga soocay adduunka. Waqtigaas, aabaha qoyska, oo uu ciyaaray Jack Nicholson, wuxuu marayaa xoogaa isbedel ah ...
Muhiim ka ah filimada argagaxa ugu fiican. Gabar xafiis ah ayaa istaagtay motel wadada dhinaceeda ah kadib markay wax xaday oo ay saacado waday. Hoteelka, oo ay wadaan nin dhalinyaro ah iyo hooyadiis, ayaa umuuqda meel xasilloon. Gabadha yari markay qubeysaneyso waa ladilaa. Mid ka mid ah shaqooyinkii ugu wanaagsanaa ee Alfred Hitchcock.
Dib u soo celinta (2007)
Muunadani filimada naxdinta leh ee Isbaanishka waxaa loo toogtay qaab jees jees ah. Sheekada waxaa sheegaya weriye iyo sawir qaade, kuwaas oo dukumintiya oo duubaya sida ay dab damisku u eg yahay habeenkii. Dabdamisyadu waxay helayaan wicitaan qof walbana wuu u baxayaa inuu arko waxa dhacay.
Riwaayadaani waxay ku saleysan tahay Booqashada wiil dhalinyaro ah oo Mareykan Mareykan ah oo u yimid hantida qoyska saaxiibtiisa cad. Marka ugu horeysa, wuxuu u arkaa iyaga cabsi, wuxuu u maleynayaa inay ugu wacan tahay xiriirka qowmiyadeed ee kala dhexeeya gabadhiisa. Yar yar waxaad arki doontaa in qaab jiliinkiisu aad uga xunyahay
Ilaha sawirka: Cineencuentro /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Qaar ka mid ah filimada naxdinta leh si loo daawado Halloween
Sagaal isku-dhafan oo wax ku ool ah oo leh jiinis dayrta